Qeerroo.org: Wallisaa Sabboonaa Jaafar Yusuuf Reebicha Hamaa Wayyaaneen Irra Gaheen Hospitaala ALERT Seene‏
Posted: Ebla/April 20, 2014 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (7)
Artist Sabboonaa Jaafar Yusuuf
(Qeerroo.org – Ebla 20, 2014) – Mootummaan Wayyaanee artistoota Oromoo ajjeesaa fi darara jabaa irraan gahaa kan as gahe Sabboonaa Oromoo Wallisaa Jaafar Yusuuf reebicha jabaa irraan gahuun yeroo ammaa kana Hospitaala ALERT jedhamu keessatti argama. Wallisaa Jaafar Yusuuf Mormii lafa naannawa Finfinnee federaala jala galchuu ilaalchisee wallee haaraa Finfinneen keenyuma hin kenninu murree jedhuun sababamee kan hidhame yoommuu tahu mootummaan Wayyaanee reebicha jabaa irraan gahuun du’aa fi jireenya gidduu seenee Hospitaala ALERT keessatti waldhaansa gadi aanaa argachaa kan jiru yoommuu tahu achittis tahu tiknii fi Poolisootni wayyaanee cunqursaa hamaa irraan gahuu irraa hiriyyootnii fi firootni isaa akka hin dubbisne dhorkanii jiran. Mootummaan wayyaanee aartii fi hayyoota Oromoo balleessuuf duuba kan hin deebine yoo tahu yeroo ammaa kana Oromoon bakka jiruu ka’ee gaaffii mirgaa akka finiinsu waamicha Oromummaa dabarsina. – QEERROO.org
(Qeerroo.org – Ebla 18, 2014) – Mootummaan Wayyaanee aartii fi Artistoota Oromoo nyaachaa alalfachaa kan as geesse Sabboonaa Jaallatamaa wallisaa Oromoo kan tahee fi yeroo ammaa kana keessatti walleewwan haaraa baasuudhaan daran jaallatamaa kan dhufe Wallisaa Artistii Oromoo Jaafar Yusuuf mootummaan wayyaanee Ukkaamsuun mana hidhaa keessatti darara irraan gahaa jirti. Mootummaan wayyaanee Wallisaa Jaafar Yusuuf dhimma Lafa naannawa Finfinnee federaala jala galchuu ilaalchisee wallee Finfinneen Keenyuma jedhu wallee baaqqee gadhiisteetta, Ati akeeka mootummaa wayyaanee Uummata kakaasuun fashalsiisuu irratti argamta jechuun mana hidhaatti ukkaamsuun darara jabaa reebichaa bakka lafeen ilmaan Oromoo hedduun keessatti nyaatame Maaikelaawwii keessatti dararaa jirti.
Mootummaan Wayyaanee Artistoota Oromoo waan Oromoo fi Oromiyaa sirban kanneen akka Eebbisaa Addunyaa, Yoseef Gammachuu, Usmaayyoo Muusaa, Abdii Qophee fi kanneen biroo hedduu darara jabaa irraan gahuun lubbuu isaanii kan dabarsite yoommuu tahu yeroo ammaa kanas Sabboontota Oromoo Artistoota waan Oromoo sirbuun oromummaa hubachiisan kanneen akka Jaafar Yusuuf mana hidhaa keessatti darara jabaa irraan gahaa jirti. Sabboonaan Artist Jaafar Yusuuf walleewwan hedduu qabu keessaa waan Uummata Oromoo haamilachiisuu fi Gootummaa wallise keessaa … Hafanfartuu Shoolee … Hara hin galtu Booree, Hayyaa lolaa yaa lola Eeeboo fi torbaan darbe keessa ammo Finfinnee fi naannawaan Finfinnee keenyuma hin kenninu murree kan jedhuu fi kanneen biroo hedduu dha. Mootummaan wayyaanee namoota gama aartiinis tahe gama barnootaan Uummata isaanii hubachiisan hidhuu fi ajjeesuun uummata Oromoo doomsee garboomsuu kan akeekkate baroota bittaa isaa mara waan taheef Uummatni Oromoo bakka jiruu kaee Wallisaa Jaafar Yusuuf mana hidhaadhaa akka gadhiifamu diddaa gama hundaan akka dhageessisuu fi dhuguma lafti Oromiyaa Finfinneen handhuura Oromiyaa taatee naannawa Finfinnees diinaaf kutnee akka hin laanne akka mirkansinu Waamicha Oromummaa dabarsina. – QEERROO.org
Artist Jaafar Yusuuf: Hayyaa lolaa Yaa Lola Eeboo …
Artist Jaafar Yusuuf: Finfinnee …
Apr 20, 14 at 2:30 pm
Reebamu ajjefamu himmachu irra nuttis rebuu dandahuuti arbu qabna oromoo haalloo baffachuu lama hindu´ani, barameeqaa wayyannen nu reebdee nu ajeestee qofaa hiimana rebnne ajesnne agarsisuu haaga hin danddenyeti hammachu ille qanffachu qabna.
ni gahaa ni gahaa kun qanidha
Apr 20, 14 at 3:26 pm
Wallisa Oromoo jaba tokkoo ammas daballe utu in dhabiin kaanee warra dhimmi laalutti haa iyyannu, adunyaa haa beeksiifnu yaa Oromo. I suggest a petition.
Apr 21, 14 at 7:03 am
Iyyachun homaa nuu hinfidu akkuma isaan nama keenya ajjesaa jiran nutis garaa jabannee lubbuu s
aanii haa balleesinu
Apr 21, 14 at 7:43 pm
Dhiiga dhiigatu deebissa! Mucaan kun lubbuun issaa dabarraan oromoon waan qabu qabatee manaa gadi bayee haalloo baasuu qaba (yoo lubbu oromoo kumaatama lee gaafate!). Lolli kun yoo tole malee araarii hintolu. Warri petition jettan kun warra keesanitu sodaachaa isin dhalche moo lubbuu keessan meeqaan bittanii laata?
Kan sodaatanis du’a kan hinoolles du’a. Olis kaannu gadis kaannu, hiyyoomnus sooromnus, addaannus, gurrachofnus, scientisti fi professoriin taanus, presidaantii, ministera, goota fi dabeessaas taanu walgayiin biyyoodhuma tokko!
Garuu warra Biilionerii fi doctoroota tasati dua’n seenan hinyaadatu. Haadhaa, abbaa, ilmoo fi saba ofii ti jennee lubbuu keenya yoo kenniine garuu seenaa yoom lee nu yaadata. Oromoon Taddassa Birru irraanfataa? Ini nama soorreesa ture. Garuu soorummaa isa caala saba isaa jaalatee lubbuu isaa nuuf jedhee wareege. Gen Taddassaa fi gotota oromoa kan aka Elmo Qilxuu, Maamoo Mezemiriif afaan keenya lee dubbannee barreesina.
Ennaa wayaaneen Ebbissa Adgna ajjeeftu oromoon otoo manaa gadi bayee wayaneerati tarkaanfi fudhatee nama keenya akka ilaalu ture. Keessa keenya baranitiu maal nugooti jedhanii nama keenya akka hoolaati qalaa jiru. Kanaafuu adaraa yoo ofii sodaattan ilmaan keessan sodaa hindhaalchina. Ijoollee keesaniti wayee sodaa hinodeessinaa.
Waarri nubitaa jiru kunis lubbuu isaanii jibbanii otoo hintaane garaa kutataniituma loltuu Mengistuu irra meeshaa hiiksisanii ittiin gobani. Kana caala gootummaan maalidha? Carraan nuti qabnuwoo kana caala maali dha? Hamma yoomiitti sodaaf jennee garbummaan jiraanna?
Waanti ani hindeegarre tokko kophaa harka duwaa yoo tankkiti fiigani ofaajjesissani, kuni anaaf gootummaa otoo hintaane gowwumma dha. Garuu wali galanii malaan qawwee tokko yoo irraa fudhatan gotummaa bira darbe boonsa dha.
Mezgebu Demeke Boru
Apr 22, 14 at 1:07 am
@adooyyee said,i commpletly agree with you let us start the petition.
Apr 22, 14 at 6:50 am
Abbaa Boora, Lolaan malee bilisumman akkaa indhufnee dhibba dhibbattan itti amana. Garuu, Har’a ykn baati har’a lolatti bobbauuf qophiin jira? Ammaa qophiin akkasii godhamutti hoo teenyee dhuma laalluu? Qawwee fii diplomacy hand to hand deemu danda’a bari. Atii kara kee qophee lola itti fufii, warri petetion baressusis itti haa fufu. Mee waanumti xinnoon kun (petition) iyyu dura haa hojjetamu. Rakkoon keenya nama waa hojetutu injiriu.